५ जनाको मृत्यु संगै २४ जना आयातीत र ४१३ जनामा कोरोना संक्रमण नयॅा भेरियण्टको दोस्रो केस देखापर्यो - Gulmeli Online TV
१५ बैशाख २०७९, बिहीबार १५:११
नारायण भण्डारी हङकङ २८ अप्रिल २०२२
हङकङमा कोरोनाको पाचौ लहरले बिदा लिने वेलामा डलमलाएको छ हुत बत्तिपनी निभ्ने बेलामा चमक्क उज्यालो बोल्छ भनेजस्तै पो हुने हो की या यस्तै डलमलाएरै हैरान पार्ने हो समयले वताउला।
हङकङमा आज ४१३ जना कोभिड-१९ का केसहरू फेला परेका छन जसमा न्यूक्लिक एसिड परीक्षण र २०६ जनामा ​​संक्रमण पुष्टि भएको छन भने २०७ केसहरू Rapid Antigen Test (RAT) अनलाइन मार्फत पुष्टि भयो। आज २४ वटा केस आयातित रहेका छन। तीमध्ये १९ जना न्यूक्लिक एसिड परीक्षणबाट पत्ता लागेका थिए भने पाँचमध्ये र्‍यापिड एन्टिजेन परीक्षणबाट पत्ता लागेको थियो। तीमध्ये ७ जना CH170, TR980, AC007 र ET608 बाट सम्बन्धित चार उडानहरू मार्फत हिजो हङकङ आइपुगेका थिए। अरु ७ जना पहिले आइपुगेका थिए ।
पाँचौं लहरको शुरुवातदेखि कुल १,१९०,८५० कोभिड-१९ केसहरू रेकर्ड भएका छन।आज नयाँ पुष्टि भएका २०६ जनामध्ये अस्पताल प्राधिकरणबाट ६८, स्वास्थ्य विभागको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट २५ र बाँकी ११३ निजी प्रयोगशाला वा सामुदायिक परीक्षण केन्द्रबाट प्रत्यक्ष पुष्टि भएका छन् ।
परीक्षण गरिएका ९५ केसहरूमध्ये डेल्टा भेरियन्ट समावेश भएको कुनै पनि केस थिएन। ८९ केसहरूमा ओमिक्रोन भेरियन्ट समावेश थियो भने कम भाइरल लोडका कारण ६ वटा केसहरू पत्ता लगाउन सकिएन। डा. चुआङले भने कि यसअघि ४० वर्षीय पुरुषलाई कमिर्नाटी भ्याक्सिनको २ डोज लगाएर खोप लगाइएको घटना पछि नयाँ ओमिक्रोन बीए.५ संस्करणबाट संक्रमित भएको पुष्टि भएको थियो। उनी फ्लाइट नं. QR818 दक्षिण अफ्रिकाबाट दोहा हुँदै २३ अप्रिलमा उनी रिगल स्काईसिटी होटलमा बसेका थिए। बिरामीमा कुनै लक्षण थिएन। Omicron BA.5 भेरियन्ट हङकङमा फेला परेको यो दोस्रो केस हो।
विद्यालयमा आज थप १० जना कोभिड-१९ मामिलाहरू रिपोर्ट गरिएको छ। तीमध्ये ७ जनाले र्‍यापिड एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएका थिए भने ३ जनाले न्यूक्लिक एसिड परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएका थिए। जसमा ९ विद्यार्थी र १ शिक्षक रहेका छन् ।
पाँचौं लहरको शुरुवातदेखि हालसम्म कुल ९,०७४ जसमा ३,७४१ महिला र ५,३३३ पुरुष बिरामीको मृत्यु भएको छ भने आज कुल ५ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य प्राधिकरणले जनाएको छ।
अस्पताल प्राधिकरणका डा लाउ का-हिनले अझै एक हजार ६२५ भन्दा बढी बिरामी अस्पतालमा भर्ना भइरहेको बताए । हालसम्म कुनै पनि बिरामीको अवस्था गम्भीर छैन र तीमध्ये २ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । गम्भीर अवस्थामा रहेका ११ जनाको सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको छ ।
सरकारी अस्पतालमा आज बिहान १२ बजेसम्म ५ बिरामीको मृत्यु भएको छ । उनीहरुमा ६० देखि ९५ वर्षका ५ पुरुष र १ महिला रहेका छन् । ६५ वर्षभन्दा माथिका मृतक बिरामीमध्ये ४ जना र तीमध्ये ३ जना वृद्धवृद्धाका लागि आवासीय हेरचाह गृहका थिए। तीमध्ये ४ जनालाई खोप लगाइएको छैन भने १ जनालाई दुईवटा खोप लगाइएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा २४३ बिरामी निको भएका छन् । जसमध्ये १६५ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन् । यसैबीच, भर्ना स्क्रिनिङका क्रममा १ जना बिरामीको परीक्षण पोजेटिभ देखिएको छ भने १ जना नजिकका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
यसैबीच अस्पताल प्राधिकरणअन्तर्गतका २२ हजार ४४३ कर्मचारीमा कोभिड–१९ पोजेटिभ देखिएको छ । तीमध्ये २२ हजार १० जना निको भएर काममा फर्किएका छन् ।
आज फेरी कोरोना उकालो लाग्यो संक्रमित ४३० जना संगै १५ आयातित